ကလေးတို.ဆရာမ၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဘာသာတိုင်းမှာ သူ.ယုံကြည်ချက်နဲ.သူ ရှိနေကြတာ သဘာဝပါ
ဒိဆောင်းပါးကတော့ ကျမရဲ့ " ဆရာမမေ ဘလောက်" မှာ တင်ထားတာ ကြာခဲ့ပါပြီ ။အခု မကြာသေးခင်က သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် အလည် ရောက်သွားခဲ့မိတဲ့" တစ်ဘဝစံ - တစ်ယူသန် " တစ်ဘက်သတ် ရေးနေတဲ့ ဘလောက်တစ်ခုကြောင့်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ကလေးတို.ဆရာမ shared thein wai's blog post on Facebook
ကလေးတို.ဆရာမ သည်thein wai's ၏ '**#ပျော်စရာအကောင်းဆုံးမိသားစုဘ၀ကိုရရှိအောင် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နည်း။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကလေးတို.ဆရာမ သည်thein wai's ၏ 'ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ တရားဓမ္မနဲ့ တည့်အောင်နေပါ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကလေးတို.ဆရာမ သည်thein wai's ၏ 'စိတ်ကိုလှအောင် ပြုပြင်ပါ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကလေးတို.ဆရာမ သည်thein wai's ၏ 'တွယ်တာမိတဲ့ သင်္ကန်းချောချောလေး။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကလေးတို.ဆရာမ သည်thein wai's ၏ 'ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းမှ အကြင်နာတရားသို့။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကလေးတို.ဆရာမ သည်thein wai's ၏ '့ သရဏဂုံတည်ခြင်း၏အကျိုး။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန် - မြန်မာ
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 31, 2015 တွင်10:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments5Likes
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိတအသင်း၏ (၁၄) ကြိမ်မြောက်အလှူပွဲကို ``အောင်ဇေယျာမင်း´´
ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း၌ ( 2-8-2015) ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ
ကျောင်းတိုက်၌ သီတင်သုံး နေထိုင်ကြသည့် သံဃာတော် အပါး ( ၆၅ ) ပါး ၊ ကိုရင် အပါး
(၂၀၀ ) ၊ သီလရှင် အပါး (၈၀) ကျော်တို့အား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်ခြင်း နှင့် ကျောင်းတိုက်
မှ ခိုလုံကာ ပညာရည်နို့ သောက်စို့ နေကြသည့် မိဘမဲ့ကလေးငယ် အယောက် (၄၅၀ )
ကျော် အား နေ့လည်စာကျွေးမွေးလှူ ဒါန်းခြင်း ၊ လိုအပ်သော နေရာများ၌…
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 5, 2014 တွင်10:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုက် ၏ တရားပွဲနှင့် ယဉ်ကျေးလိမ္မာပရဟိတကျောင်းအတွက် ---
ဘန်ကောက်မှ " ၄၄၂ ဇော်ဇော်နိ်ုင်" က ကျပ်ငွေ ၁၅၀၀၀ - ဝန်းကျင်ခန်.နှင့်ညီမျှသော
ဘတ်ငွေ ၅၀၀ - ကို ၄င်း ---------
ဘန်ကောက် ABAC University မှ "ခမ်း" ကလည်း ကျပ် ၆၀၀၀၀ - ဝန်းကျင်ခန်.နှင့်
ညီမျှသော ဘတ်ငွေ ၂၀၀၀ - ကို စေတနာ သုံးတန်ပြဋ္ဌာန်း၍ လှူဒါန်းကြပါသည်။
အားလုံး အမျှ - အမျှ - အမျှ ပေးဝေပါသည်။
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 2, 2014 တွင်11:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ နေပြည်တော် မြန်မာ့အသံ- “ လူငယ်မှတ်သား-သုတစကား ”
ဒီကနေ. လူငယ် လူရွယ်လေးများအတွက် အပါတ်စဉ် အင်္ဂါနေ. ညနေ(မြန်မာစံတော်ချိန်
၄း၄၀ နဲ. သောကြာနေ. နံနက် ၁၀း၄၀) မှာထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပါတယ်။
Computer ရှိရင်တော့ internet မှာ (www.mrtv.gov.mm) ကို-ကလစ်ပါ - ပေါ်လာမယ့်
မြန်မာ့ရုပ်မြင် မှာ မျှားလေးတွေပါတဲ့ Radio ကိုရွေးပြီး မျှားလေးကိုကလစ်ပါ-နားဆင်လို.
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 17, 2014 တွင်4:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ နေပြည်တော် မြန်မာ့အသံ- “ လူငယ်မှတ်သား-သုတစကား ” ကဏ္ဍမှ အသံလွှင့်ခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးလေးပါ။
ဒီကနေ. လူငယ် လူရွယ်လေးများအတွက် အပါတ်စဉ် အင်္ဂါနေ. ညနေ(မြန်မာစံတော်ချိန် ၄း၄၀ နဲ.
သောကြာနေ. နံနက် ၁၀း၄၀) မှာထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပါတယ်။
Computer ရှိရင်တော့ internet မှာ (www.mrtv.gov.mm) ကိုကလစ်ပါ - ပေါ်လာမယ့် မြန်မာ့
ရုပ်မြင် မှာ မျှားလေးတွေပါတဲ့ Radio ကိုရွေးပြီး မျှားလေးကိုကလစ်ပါ-နားဆင်လို. ရပါပြီ…
7:27pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 19, 2016, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အခုစာရေးနေချိန်မှာ မြန်မာ့ အသံ ကနေ အသံလွင့်တာ နားထောင်နေချန်ပါ
ဝမ်းသာလို့ေ၇းလိုက်တာပါ စာအုပ်ထွက်ရင်လဲး လိုချင်ပါတယ်
8:46am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 25, 2015, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
သတိတရ ဖြင့် လာရောက်နူတ်ဆတ်ပါတယ်
1:26pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 23, 2015, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဟီးးး အတွက်အချက်တော်ချက်နော်..ဘတ် ၃၀၀၀ အတွက် မြန်မာငွေကျပ်-88235.29/-ပါ 102000 ယူလိုက်မိတော့ 13765 ကျပ် ပိုသွားပါတယ်။ တရားပွဲ အလှူ ငွေထဲကိုပဲ ထည့်ဝင်လှူ ဒါန်းပေးလိုက်ပါ့မယ် ဆရာမ။
1:25pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 29, 2014, တွင် မူကြိုဆရာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လေးစားအပ်ပါသောဆရာမခင်ဗျာ ကျနော်တင်သောပို့စ်များဟာကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုသဘောကျပြီးအခြားဆိုဒ်များမှတဆင့်ကူးယူတင်ပြခြင်းတွေရှိတဲ့အခါ မူလစာရေးသူဟာအမျိုးသမီးဖြစ်၍ရှင်ဟုသုံးနှုန်းခြင်းများပါလာခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကျနော်ပို့စ်အောက်ဆုံးမှာလဲ တဆင့်ကူးယူသောလင့်များအမြဲထည့်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ..။
ကျန်းမာ၊ ထီပေါက်၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိင်တဲ့ သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ..။ သာယာမှုနဲ့ သာသနာပြုနိင်တဲ့ သူတော်ကောင်းတွေ ဖြစ်ကြပါစေ...။
6:17pm အချိန်သြဂုတ် 11, 2014, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
၂ ​ယောက်​စလုံးနဲ့ ဖုန်းဆက်​သွယ်​လို့ ရပါပြီ။ ။ ။
11:27am အချိန်ဇွန် 7, 2014, တွင် ma nge hlaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:25am အချိန်ဇွန် 7, 2014, တွင် ma nge hlaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:23am အချိန်ဇွန် 7, 2014, တွင် ma nge hlaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:22am အချိန်ဇွန် 7, 2014, တွင် ma nge hlaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဆရာမ ငယ် ၅လပိုင်း ၂၀ ရက်နေမှာကနေဒါကိုပြန်ရောက်ပါတယ် ဆရာကိုလည်းကျေးဇူတင်ပါတယ်..ဆရာမရဲ့ ပြတ်သားရိုးရှင်တဲ့ စိတ်ဓတ်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်ရှင်..ငယ်တိုကတော့သူ သဘေားလဲဖြူပါတယ် စိတ်လဲးခိုင်မာတယ် ရာရာကိုလည်းနာလယ်ပြီး သိခံတပ်ပါတယ်....ဆရာမနဲ့ ခဏလေးတွေရပေမဲ့ ဘဝအတွက် မေ့မရတဲ့ အမှတ်တရတွေပါ...ကျမ္မာ လန်း ဆန်း ချစ်ပန်းဝေနှိင်ပါစေ...1032.JPG
11:08am အချိန်ှဧပြီ 30, 2014, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
နေကောင်းကျမ်းမာပါရဲ့ လား..တလောက ကွန်ပျူတာပြတ်သွားလို့ 
အခုမှပြန်ဝင်ဖြစ်တယ်..ထာဝရ ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို အမြဲးတမ်း သတိရနေလျှက်ပါ